Home » သတင်း » နာနတ်သီး Entertainment ကပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အ Facilis Shared သိုလှောင်မှုကိုရွေးကောက်ပြီး
နာနတ်သီး Entertainment ကပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အ Facilis Shared သိုလှောင်မှုကိုရွေးကောက်ပြီး
Hudson, MA (မေ 14th, 2019) - The Danish production company Pineapple Entertainment recently choseaFacilis shared storage solution to enableacollaborative approach to media production.
“We looked at systems like လွန်စွာလိုလားသော Nexis, but having talked to guys I trust about this kind of technology, they recommended that the Facilis Shared Storage system would be the best choice for us,” he says.
အဆိုပါ Facilis system has madeasignificant difference to Pineapple’s workflow, as Marten stated: “We could not do the work we do without it, both in terms of time saving and the end result. We definitely made the right decision.”
လွန်စွာလိုလားသော ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-05-14
ယခင်: '' ဒီမေးအိန္ဒိယ '' ဖွင့်ဖို့ QYOU မီဒီယာနှင့်အတူ SonyLIV မိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: Los Angeles မြို့ 2019: EditShare Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာမီဒီယာ & Entertainment ကစက်မှုဝန်ကြီး Advanced အနိုင်ရရှိမှုက၎င်း၏နောက်ဆုံးဆုချီးမြှင့်ပြ